China Umzi mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
I-Thermoplastics yindawo efanelekileyo yokubonisa kunye nokutsha. Ukukhetha kwethu umgangatho ophezulu, iphepha le-acrylic eliguqukayo kunye neemveliso zesipili zeplastiki kunceda abayili bazise imibono yabo yoyilo ebomini. Sinikezela ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu, iipateni, ubungakanani bephepha kunye nefomula yokuhlangabezana neemfuno zobugcisa obuninzi kunye nokusetyenziswa koyilo.
• Umsebenzi wobugcisa
• Ukuhonjiswa kodonga
I-Thermoplastics yindawo efanelekileyo yokubonisa kunye nokutsha. Ukukhetha kwethu umgangatho ophezulu, iphepha le-acrylic eliguqukayo kunye neemveliso zesipili zeplastiki kunceda abayili bazise imibono yabo yoyilo ebomini. Sinikezela ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu, iipateni, ubungakanani bephepha kunye nefomula yokuhlangabezana neemfuno zobugcisa obuninzi kunye nokusetyenziswa koyilo. Sinikezela ngokukhetha okukhulu kuyilo lwe-acrylic kunye nokuveliswa kweentengiso kunye namashishini kunye nokuhonjiswa kwasekhaya ngeendlela ezahlukeneyo zoku-odola-ukusuka kubukhulu ukuya kwiipateni nokusuka kwimibala ukugqiba.
Ukusuka ekukhuseleni imiboniso kwiifoto, i-acrylic lukhetho olukhethiweyo lokusebenzisa ii-glazing application. Imiboniso yeziko lolondolozo lwembali kunye neminye imiboniso iyancedakala nakwizinto zokucoca i-UV ze-acrylic. Ayisiyi kukhusela i-acrylic kuphela kubugcisa-bubugcisa. I-acrylic yindawo efanelekileyo yoyilo.
I-DHUA Acrylics yindlela esefashini kunye neyangoku yokuzisa uxolo, imvisiswano kunye nothando lokuthinta ikhaya lakho okanye ukuhonjiswa kweofisi. Umhombiso wodonga lwe-acrylic awunetyhefu, awunakunqanqazeka, ukhuseleko lwendalo kunye nokulwa nokubola. Kukulungele ukuhombisa iindonga zangaphakathi okanye iifestile zegumbi lokuhlala, igumbi lokulala, okanye ivenkile. Akukho monakalo kwindalo esingqongileyo nakwimpilo.
Ukushicilelwa kwe-acrylic yindlela yangoku yokubonisa ukufota, umsebenzi wobugcisa, imiqondiso, imiyalezo yokuthengisa okanye nawuphina umfanekiso kumdonga oncomekayo oxhonywe kuprinta. Iguqula umfanekiso wakho ube ngumsebenzi wobugcisa omangalisayo xa uprinta ukufota kwakho okanye umsebenzi wobugcisa ngqo kwi-acrylic plexiglass. I-DHUA acrylic ziimveliso ezikhethwe ngabenzi beempawu kunye nabaqulunqi ngenxa yokuqina, imozulu kunye nokukhululeka kwe-thermoforming.
Ukusuka kwindawo ekuthengwa kuyo (POP) kwimiboniso yemyuziyam, i-DHUA acrylic yinto efanelekileyo kwimiboniso kunye neebhokisi zokubonisa / iibhokisi ngenxa yomgangatho ophezulu we-acrylic materail oboniswe nge-shatterproof, i-Optical Pure, i-lightweight, ixabiso elifanelekileyo, esebenzisekayo kwaye kulula ukuyila. Yenza imveliso yakho ikhanye.
I-acrylic inembonakalo yeglasi enika isitayile esahlukileyo. Iphepha le-acrylic lelona lingaphantsi lomgangatho wolwakhiwo lweetafile, iishelufa kunye nezinye iindawo ezisicaba apho iglasi ingenakho okanye ingasetyenziswayo.